बिहे गरेको २ बर्ष पुरा नहुदै, आफ्नै श्रीमानले लिए श्रीमतीको ज्या’न ,आखिर किन गरे यस्तो? ,हेर्नुहोस। – Khabar Chautari
बिहे गरेको २ बर्ष पुरा नहुदै, आफ्नै श्रीमानले लिए श्रीमतीको ज्या’न ,आखिर किन गरे यस्तो? ,हेर्नुहोस।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष १९, २०७७ समय: १७:३९:५८